टेनेरिफमा best वटा उत्तम समुद्र तटहरू जुन तपाइँ भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। के तपाईं ती सबैलाई चिन्नुहुन्छ? | Absolut यात्रा
टेनेरिफमा सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू
सुसाना Godoy | | Tenerife
इडेलिक प्याराडाइजहरू, अद्भुत दृश्यहरू र स्थानहरू जुन तपाईंलाई आराम गर्न आमन्त्रित गर्दछ। यी सबै र अधिक, हामी बीचमा फेला पार्नेछौं टेनेरिफमा सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू। जब राम्रो मौसम आइपुग्छ, धेरै मानिसहरू पहिले नै योजना बनाउँछन् तिनीहरूका छुट्टीहरू कस्तो हुन्छन्। पक्कै पनि तिनीहरूमा, समुद्र एक मुख्य पात्रहरू मध्ये एक हुनेछ।
हामीसँग धेरै कुनाहरू छन् ठूलो बालुवा क्षेत्र, तर आज हामी टेनेरिफ जाँदैछौं। एउटा टापु जुन हामी भन्छौं, विशाल समुद्र तटको रूपमा इडेलिक स्पेसमा ताराहरू। यदि तपाईं ती सबैको आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाईंको लागि ल्याउने प्रत्येक चीज नभुल्नुहोस्, किनकि यसले तपाईंलाई राम्रो मौसम स्वागत गर्दछ।
1 टेनेरिफमा सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू, प्लेआ डे लस प्याटोस
2 Médano र Tejita बीच
5 डिएगो हर्नान्डेज बीच
7 हावा पोखर
8 Bullullo समुद्र तट
9 अल सॉकोरो बीच
10 एरेना बीच
टेनेरिफमा सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू, प्लेआ डे लस प्याटोस
पहिलो स्टप मध्ये एक प्लेया डी लस प्याटोस हो। यो ला ओरोटावाको नगरपालिकाको हो। तपाईंले कार छोड्नु पर्छ र एक घण्टाको एक चौथाईको लागि हिड्नै पर्छ, त्यसैले यो प्राय जसो समुद्र तटहरू मध्ये एक होइन। हामी भन्न सक्छौं कि यो जंगली समुद्र तट हो, जहाँ कालो बालुवा यसको सब भन्दा राम्रो सहयोगी हो। यो 'एल Ancón' को समुद्री किनार नजिकै अवस्थित छ। दुबै टापुबाट आउने एक प्रकारको छेउबाट अलग गरिएको छ। लस प्याटोस बीच 630० मिटर लामो छ। यसको वरपर तपाई पहाडहरू र उत्तम वनस्पतिसँगै हरियो दृश्यको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
Médano र Tejita बीच
हामीले उल्लेख गरेका दुईको साथ केहि कुरा भयो, हामीले मादानो र तेजीता भेट्टायौं। त्यो हो, तिनीहरू विभाजित दुई समुद्री तटहरू हुन्। तर यस अवस्थामा, टापुको कारणले होइन तर एक प्रकारको रातो पहाडको कारणले हो। कुनै श doubt्का बिना, यस idyllic सेटिंग को लागी एक मुख्य बिन्दु। ला तेजीताको क्षेत्र सर्फिंग र विन्डसर्फि ofका सबै प्रेमीहरूको लागि उत्तम छ र यसको भेरियन्टहरू। यो भनिनु पर्दछ कि यो एक सुरक्षित क्षेत्र घोषणा गरीएको क्षेत्र हो। त्यसोभए तपाईं उनीहरूसँग पनि कारमा जान सक्नुहुन्न। त्यहाँ 'Médano-Los Abrigos' रोडको नजिक कार पार्कहरू छन्। एकचोटि तपाईंले यस क्षेत्रमा पार्क गर्नुभयो, तपाईंसँग समुद्रीतट क्षेत्रमा पहुँच गर्न केहि ट्रेलहरू हुनेछन्। यस अवस्थामा, यो केवल or वा minutes मिनेट मात्र हुनेछ।
टेनेराइफमा सबैभन्दा उत्तम समुद्री तटहरू मध्ये हामी "Antequera" भनिने एक पाउँछौं। यस मामलामा, यो केहि बढी सुनसान समुद्र तट हो। यसलाई पहुँच गर्न तपाईं यसलाई समुद्रमार्फत वा कुनै त्यस्तो बाटोबाट गर्न सक्नुहुन्छ जुन पार गर्न सजिलो छैन।। यो सत्य हो कि यस कारणले गर्दा, तर यसको महान् सुन्दरताको कारण, त्यहाँ धेरै यात्राहरू छन् जुन सान्टा क्रुजबाट, साथ साथै सान एन्ड्रेसको शहरबाट छुटेका छन्। यस कुनाको र gray्गको र 400्गको साथ, meters०० मिटर लामो र २ meters मिटर चौडाइको आनन्द उठाउन लायक छ।
धेरै विचारहरू पनि यसमा सहमत छन्: यो टेनेरिफको सब भन्दा दर्शनीय समुद्री तट हो। यो उत्तरी किनारमा, अनागा क्षेत्र मा अवस्थित छ। गर्मीमा यसको मध्यम पेशा हुन्छ, किनकि यस्तो देखिन्छ कि पर्यटकहरू यस क्षेत्रमा आउँदैनन्। यसको पहुँच मार्गबाट ​​पनि हुन्छ, जुन सुरु हुन्छ एक पटक हामीले सडक छाडे पछि। तपाईसँग नजिकैको एउटा रेस्टुरेन्ट पनि छ जुन ग्यास्ट्रोनोमी र ठाउँको दृश्यहरूको आनन्द लिन सक्षम हुन। समुद्र तटमा पुग्न यसले १ it मिनेट लिन सक्दछ। पछाडि चढेको कारण धेरै पुराना व्यक्तिको लागि यो सिफारिस गरिएको छैन। यो सत्य हो कि यदि तपाईं नुहाउनुहुन्छ भने, तपाईंले करन्टहरूको साथ सावधान हुनुपर्छ। त्यसोभए सबै भन्दा राम्रो कुरा भनेको थोरै सावधानी अपनाउनु र सूर्यास्त दृश्य र प्रोमेनेडको मजा लिनु हो।
डिएगो हर्नान्डेज बीच
यो ठाउँको अर्को उत्कृष्ट रत्न हो। यो अवस्थित छ 'Caleta de Adeje' र 'El Puertito de Armeñime' को बिच, टेनेरिफको दक्षिण। त्यहाँ एक गल्फ कोर्स छ र यो समुद्री तटमा पुग्न उत्तम तरिका भनेको भनेको पाठ्यक्रमबाट सुरू हुने एक मार्गबाट ​​हो। यदि तपाईं राजमार्गबाट ​​आउँदै हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं एक्जिट B B बी लिनुहुनेछ। एकचोटि तपाईं बाहिर जानु भयो भने, तपाईंले 'गोल्फ डे एडेजे' का लागि निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्नेछ। यसको बालुवा सुनौलो छ र समुद्रको रंग फ़िरोज़ा हो, त्यसैले, यी डाटाको साथ तपाईंको भ्रमण पहिले नै आवश्यक छ।
मैले यो याद गर्न सकिन टेरेसिटास बीच। यो सान एन्ड्रेसको शहरमा अवस्थित छ र ताडको रूखहरू साथै सुनहरा बालुवा पनि छ। यस अवस्थामा यसका पानीहरू एकदम शान्त छन्, यसले परिवारसँग रमाइलो गर्न एक उत्तम विकल्प बनाउँछ। थप रूपमा, तपाईंसँग सबै सेवाहरू छन् र समुद्र तटमा, साथ साथै १०० भन्दा बढी स्थानहरू भएको कार पार्क। तपाईं दृश्यहरु साथै ग्यास्ट्रोनोमीको रमाईलो गर्नुहुनेछ, बिभिन्न बिच बारहरूमा धन्यवाद।
बीचबाट km कि.मि. अवस्थित छ सान्ता क्रुजको राजधानी Tenerifeयस सुनौलो बालुवा समुद्र तट १. 1,5 किलोमिटर लामो छ र प्राय: जसो स्थानीयहरू र पर्यटकहरू आफैं आउँछन्। किनारबाट नै meters०० मिटर जति बनाइएको एउटा ब्रेकवाटर छ, जसको अर्थ हो कि किनाराहरू बच्चाहरूसँग प्याडलिंगको लागि आदर्श हो, तर छालहरू लगभग अस्तित्वमा छैनन्। टेनिरफको यस सुन्दर समुद्री तटमा एक दिन खर्च गर्नु दुबै रमाइलो र रमाइलो छ।
टेनेरिफको उत्तरी तटमा र 'La Guancha' को नगरपालिका मा, हामी फेला पार्दछौं 'एल Charco डेल भिएन्टो'। यो विभिन्न ज्वालामुखी विस्फोटबाट सिर्जना गरिएको वातावरण हो। तसर्थ, हामी समुद्र तटको बारेमा तर लावाको हतियारले बनेको खाडीको पनि कुरा गर्न सक्छौं। कुनै श doubt्का बिना, यो एक धेरै सुन्दर वातावरण हो जुन रमाईलो पनि छ। यसमा क्रिस्टल सफा पानी छ तर यो सत्य हो कि कहिलेकाँही तिनीहरूले ठूलो छाल उठाउँछन्।
Bullullo समुद्र तट
टेनेरिफमा अर्को उत्तम समुद्री तटहरू र धेरैले मनपराएको एउटा हो 'एल बोल्लोलो' समुद्र तट। यसको बालुवा ज्वालामुखी मूलको कालो हो जुन क्रिस्टलीय पानीसँग भिन्न छ। अर्को जंगली समुद्री किनार हुन, यसको पहुँच सबैभन्दा जटिल छैन। यो भन्नु पर्दछ, आफूलाई पत्ता लगाउन, कि यो समुद्र तट 'Playa de लस प्यातोस' को बाँया पट्टि अवस्थित छ। समुद्र तट करिब १ 160० मिटर लामो र यसको कोभ, meters० मिटर छ। तपाईंसँग समुद्री किनार नजिक धेरै पार्किंग क्षेत्रहरू छन्। थप रूपमा, यस समुद्री किनारमा एक समुद्र तट पट्टी छ, जहाँ तपाईं एक धेरै चिसो पेय रमाउन सक्नुहुन्छ।
अल सॉकोरो बीच
यो उत्तरमा र 'लस रिलेजोस' को नगरपालिकामा अवस्थित समुद्री तट हो। तपाईं कार द्वारा सामान्य उत्तर राजमार्ग (C-820) बाट त्यहाँ पुग्न सक्नुहुनेछ। तपाईं धेरै नजिक एक डिटोर देख्नुहुनेछ सैन पेड्रो दृष्टिकोण र यसले तपाईंलाई समुद्र तटको खुट्टामा लैजान्छ। यद्यपि यसको उत्कृष्ट सौन्दर्य छ, यो सत्य हो कि हामीले अत्यन्तै सावधानी अपनाउनु पर्दछ किनकि यो समुद्र र समुद्री छालहरू भएको समुद्र हो।
यो स्थानीय समुद्रतट उही टापुको दक्षिण पश्चिमी किनारमा उही नामको शहरमा लुकेको छ टेनेराइफ राम्रो कालो ज्वालामुखी बालुवाको साथ, यो टेनेरिफको सर्वश्रेष्ठ समुद्री तट हो। समुद्री किनारमा नै व्यापक सुविधाहरू, साथै पसलहरू, बारहरू र क्याफेहरू केहि टाढा हिँडेर, यो समुद्र तट धेरै लोकप्रिय छ र अक्सर पर्यटक र स्थानीयहरू द्वारा अक्सर हुन्छ। छ टेनेरिफ बीच यो धेरै परिचित र मैत्री छ।
तपाईका लागि टेनिरफमा उत्तम समुद्री किनार कुन हो?
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » टेनेरिफमा सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू
म के सामान ल्याउन सक्छु?